Impembelelo yokuQokelela kunye nokuphucula idatha ye-B2B yoThengiso | Martech Zone
Impembelelo yokuQokelela kunye nokuPhucula idatha ye-B2B yokuThengisa
NgeCawa, ngoSeptemba 13, 2015 Douglas Karr
Xa ndandiqala uhambo lwam lweshishini lokumilisela ukuphucuka okuqhubekayo, into efunyenweyo eyayingqinelana nokuphucula nayiphi na inkqubo yayikukungasebenzi kakuhle - kunye nethuba elilandelayo - ekunikezelweni. Kumashumi eminyaka kamva kwaye ndiye ndafumanisa ukuba oku kuyinyani nakwiarhente yethu.
Omnye umzekelo kuxa abathengi bethu benengeniso ngaphakathi kwinqanaba labo. Xa umenzi wesigqibo etshintsha, amaxesha ngamaxesha kunokuba ubudlelwane nomthengi busemngciphekweni. Ayinamsebenzi ukuba siqhuba kakuhle kangakanani; yinto nje yenyani. Umntu omtsha unobungcali, iinkqubo kwaye - rhoqo - iqela leenkampani ezixhasayo esele zibancedile ngaphambili kwaye ziya kubanceda nakwixa elizayo.
Xa utshintsho lwenzeka kubunkokeli, uhlahlo-lwabiwo mali kunye namathuba alandelayo. Omnye umzekelo-sihlala sizifumana sisebenzela ukuqala kwetekhnoloji yokuthengisa encinci ebinethamsanqa kwinkxaso mali. Utshintsho lukho kuyo yonke indawo, nangona! Kule infographic evela kwintengiso, bayayiqaphela into yokuba qho ngeyure ezingama-120 iidilesi zeshishini ziyatshintsha, iinombolo zomnxeba ezingama-75 ziyatshintsha, ii-CEO ezingama-20 ziyayishiya imisebenzi yazo kwaye kwasekwa amashishini amatsha angama-30. Ukufikelela kwidatha enje kuyimfuneko ekukhuleni kweshishini lam nakwelakho.
I-Salesforce Data.com inokukunceda ekutyebiseni idatha yakho ukuze ukwazi ukuvelisa iiprofayili ezibanzi ezenza ukuba umntu abenakho, akuncede ekufumaneni ulwazi ngokwisahlulo esingcono kunye nokubekwa phambili ngokubaluleka kunye nokuphucula ukuthengisa kunye nokulungelelanisa ukuthengisa imiyalezo kunye nezibambiso.
Abathengisi banamhlanje kufuneka badibanise ubuchule kunye namandla okubalisa amabali kunye nohlalutyo kunye neendlela eziqhutywa zedatha. Idatha engcono yenza ukuba abathengisi bakhe amaphulo ekujolise kuwo kwaye bahambise umxholo olungileyo kumathemba. Ngokuqokelela kunye nokuhlalutya idatha ekhokelayo, abathengisi bayakwazi ukudlulisa ulwazi olunzulu lwabathengi kwiqela labo lokuthengisa, ukuqinisekisa ukuba wonke umntu ukwelo phepha linye ekwenzeni amava omntu owenzele wena. UKim Honjo, uMthengisi
Idatha ibonelela ngamathuba amahle kumashishini afana nam. I-Salesforce ine-e-ncwadi entsha, AmaQela eeNkcukacha zeDatha aqhuba njani ukuPhumelela kweShishini, ukuze amashishini afunde ukuba ukuthengisa, ukuthengisa, kunye neqela lolawulo lweCRM banokwakha njani umbutho weedatha ophumeleleyo, ukuqhuba ngempumelelo ishishini.
tags: b2bIdatha yoqhakamshelwano b2bidatha ye-b2bidatha yoqhakamshelwanoIinkcukachaukugqibelela kwedathamgangatho wedathaidatha yokuthengisaUkunika amandla ukuthengisaukuthengisa
I-DivvyHQ: Ukucwangciswa kweMixholo ePhakamileyo kunye nokuHamba koMsebenzi
Intengiso yeVidiyo yeYashi yeNgingqi yeJografi